Izifundo zokubukeza - iGeofumadas
Dala amamodeli we-BIM wokufakwa kwamapayipi Okuzokufunda Sebenza ngokubambisana kumaphrojekthi wezindlela eziningi ezibandakanya amaphrojekthi wamapayipi Imodeli yezinto ezijwayelekile zamasistimu wamapayipi Qonda ukusebenza okunengqondo kwezinhlelo ku-Revit Sebenzisa amathuluzi wokuhambisa nawokuzenzakalela wamapayipi Yenza ...
Izifundo - BIM MEP Izifundo ze-Revit
Kulesi sifundo sizogxila ekusetshenzisweni kwamathuluzi e-Revit asisizayo ekwenzeni ukuhlaziywa kwamandla kwezakhiwo. Sizobona ukuthi singalufaka kanjani ulwazi lwamandla kumodeli yethu nokuthi siluthumela kanjani lolu lwazi ukwelashwa ngaphandle kweReit. Esigabeni sokugcina, sizokunaka ukudala amasistimu anengqondo ...
Siyakwamukela endaweni ye-Naviworks, ithuluzi lokusebenza ngokubambisana lika-Autodesk, elenzelwe ukuphathwa kwamaphrojekthi wokwakha. Lapho siphatha ukwakhiwa nokutshala amaphrojekthi wokwakha kufanele sihlele futhi sibuyekeze izinhlobo eziningi zamafayela, siqinisekise ukuthi imikhakha eyahlukahlukene isebenza ngokubambisana futhi ihlanganisa idatha ukwenza izethulo ...
Izifundo - BIM MEP Izifundo - Ukusebenza kwe-BIM Izifundo - Ukwakhiwa kwe-BIM Izifundo ze-Revit
Le nkambo ye-AulaGEO ifundisa ukusetshenziswa kweRevit ukumodela, ukuklama nokubala amasistimu kagesi. Uzofunda ukusebenza ngokubambisana neminye imikhakha ehlobene nokwakhiwa nokwakhiwa kwezakhiwo. Ngesikhathi sokwenza isifundo sizobheka ukucushwa okudingekayo ngaphakathi kwephrojekthi yeRevit ukuze sikwazi ukwenza ...
Kulesi sifundo sizogxila ekukhipheni ubuningi ngqo kumamodeli wethu we-BIM. Sizoxoxa ngezindlela ezahlukahlukene zokukhipha inani sisebenzisa iRevit neNaviswork. Ukukhishwa kwezibalo zemethrikhi kuwumsebenzi obalulekile oxubeke ezigabeni ezahlukahlukene zephrojekthi futhi udlala indima ebalulekile kubo bonke ubukhulu be-BIM. Ngalesi sifundo uzofunda uku ...
Izifundo - Ukusebenza kwe-BIM Izifundo zeNavisWorks Izifundo ze-Revit
Funda ukwakheka kwesakhiwo usebenzisa isoftware ye-Advanced Steel Design. Dizayina isisekelo esiphelele sokwakha, izinsika zemishayo, imininingwane Amapulani we-Quantification nemiklamo Umfundisi uchaza izici zokuchazwa kwemidwebo yezakhiwo nokuthi zingenziwa kanjani ngokumodela okuthathu. Kuchazwa kanjani izakhiwo zokuphrinta kuchazwe futhi kuqondwe kancane kancane ...
Izifundo - Ukwakhiwa kwe-BIM Izifundo ze-Revit
Umhlahlandlela wokuklama osebenzayo onemininingwane yokwakha eqondiswe ekwakhiweni kwesakhiwo. Dweba, udale futhi ubhale phansi amaphrojekthi akho wesakhiwo nge-REVIT Faka umkhakha wedizayini nge-BIM (Ukwakhiwa Kwemininingwane Yokwakha) I-Master amathuluzi wokudweba anamandla Dala izifanekiso zakho Thekelisa ezinhlelweni zokubala Dala futhi ubhale amapulani ...
Funda ukusebenzisa i-REVIT MEP ekwakhiweni kokufakwa kwe-Sanitary. Uyemukelwa kulesi sifundo ekufakweni kweSanitary ngeRevit MEP. Izinzuzo: Uzobusa kusuka kusixhumi esibonakalayo kuye ekudalweni kwamapulani. Uzofunda ngokuvame kakhulu, iphrojekthi yangempela yezinga eli-4 lokuhlala. Ngizokuqondisa igxathu negxathu, ngeke ngicabange ukuthi wazi noma yini ngeRevit, noma ngeSanitary. ...
Ukwakhiwa kwe-BIM okwenziwe ngamakhompiyutha Lesi sifundo siyisiqondisi esinobungane nesethulo emhlabeni womklamo wekhompiyutha usebenzisa iDynamo, ipulatifomu yokuhlela ebonakalayo yomthombo ovulekile yabaqambi. Okuqhubekayo kwenziwa ngamaphrojekthi lapho imiqondo eyisisekelo yohlelo olubukwayo izofundwa khona. Phakathi kwezihloko esizobhekana nazo nomsebenzi wama-geometri ...
Izifundo - Ukusebenza kwe-BIM Izifundo Zokuhlela Izifundo ze-Revit
Dweba, udizayine futhi ubhale phansi amaphrojekthi wezinhlelo zakho nge-Revit MEP. Faka umkhakha wedizayini nge-BIM (Ukwakhiwa Kwemininingwane Yokwakha) Amathuluzi wokudweba anamandla Wokulungiselela amapayipi akho Zibale ngokuzenzakalela amadizayini Dizayina amasistimu wokufaka umoya opholile Dala futhi ubhale phansi amanethiwekhi wakho kagesi ...
Konke odinga ukukwazi ngeRevit ukudala amaphrojekthi wezakhiwo Kulesi sifundo sizogxila ekunikezeni izindlela zokusebenza ezinhle kakhulu ukuze ukwazi ukuthola amathuluzi we-Revit wokwakha amamodeli ezingeni lobuchwepheshe nangesikhathi esifushane kakhulu. Sizosebenzisa ulimi olulula nolulula ukuqonda ...
Izifundo - 3D Modeling Izifundo - Ukusebenza kwe-BIM Izifundo ze-Revit
Isifundo se-Autodesk Revit - kulula
Kulula njengokubuka uchwepheshe ethuthukisa ikhaya - isinyathelo esichazwe ngesinyathelo funda i-AutoDesk Revit ngendlela elula. Kulesi sifundo, uzofunda imiqondo ye-Revit igxathu negxathu njengoba uthuthukisa ikhaya; Izimbazo ezakhayo ekuhlelweni nasekukhuphukeni, Izisekelo, izindonga kanye ne-mezzanine slab, Iminyango namawindi, Uphahla, Usayizi, Imininingwane ...
Umhlahlandlela ophelele wokusetshenziswa kweRobot Structural Analysis yemodeli, ukubalwa kanye nokwakhiwa kokhonkolo nensimbi Lezi zifundo zizohlanganisa ukusetshenziswa kohlelo lweRobot Structural Analysis Professional lokumodela, ukubalwa kanye nokuklanywa kwezinto zesakhiwo kuzakhiwo zikakhonkolo eziqinisiwe nezakhiwo zezimboni yensimbi. Esifundweni okuhloswe ngaso ...
Funda ukusebenzisa i-Revit, i-Robot Structural Analysis, ne-Advance Steel ekwakheni izakhiwo. Dweba, qamba futhi ubhale phansi amaphrojekthi akho wesakhiwo nge-REVIT Faka umkhakha wedizayini nge-BIM (Ukwakhiwa Kwemininingwane Yokwakha) I-Master amathuluzi wokudweba anamandla Dala izifanekiso zakho Thekelisa ezinhlelweni zokubala Dala futhi ubhale ...